Taxibe Ivato: manome vahana ny fihodinana an-dalana ny 500 Ar | NewsMada
Taxibe Ivato: manome vahana ny fihodinana an-dalana ny 500 Ar
Nanomboka ny alakamisy teo, niakatra 600 Ar ny saran-dalana ho an’ny zotra mampitohy an’Ivato amin’i Vassacoss.
Tsy latsaky ny 500 Ar ihany koa ny tapa-dalana rehetra. Nampihatra izany tokoa ireo mpitatitra, saingy tapa-dalana hatreo Ambohibao sy hatreo Talatamaty izy ireo sisa miasa fa vitsy dia vitsy ireo niakatra hatrany Vassacos.
Vao mainka nanome vahana ny fihodinana an-dalana efa nampikolay ny mpandeha, araka izany, ity saran-dalana 500 Ar ho an’ny tapa-dalana ity. 100 Ar ny elanelana ho an’ny saran-dalana tapa-dalana sy ny saran-dalana hatrany Vassacos. Aleon’ny mpitatitra manao tapa-dalana hatreo Ambohibao na Talatamaty ka mahazo 500 Ar isan’olona toy izay hiaritra ny halaviran-dalana hatrany Vassacos miaraka amin’ny fitohanan’ny fiara, mandany solika ka mety hamono antoka azy ireo.
Vao mainka mahatezitra ny mpandeha ny ataon’ireo taxi-be. Nihanahazo vahana ny tsy fanarahan-dalàna. Mitazam-potsiny ny tompon’andraikitra. Tsy misy sahy manasazy fa lasa eo ambany fifehezan’ny mpitatitra avokoa ny rehetra amin’izao fotoana izao.
Very fanahy mbola velona ny mpandeha, tsy manana raiamandreny itarainana. Tsy maintsy manaraka izay tian’ny mpitatitra hatao.
Anisan’ny zotra anjakan’ny gaboraraka ny zotra Ivato. Mpaniratsira mpandeha, maloto, tsy refesi-mandidy, ambonin’ny lalàna ny mpamily sy ny mpanampy azy ary ny tompon’ny fiara. Manginy fotsiny ny tsy fanajana ny bokin’andraikitra. Famonoan’olona amin’ny fandehanana mafy sy ny fandratrana olona vokatr’izany….
Malaza tsy ihinanana ny ao Ivato raha ny resaka fitaterana no asian-teny. Lasa singam-bolo mandavo ny vositra io tsy fifehezana ny taxi-be io. Na tsara avokoa aza ny ezaka ataon’ny tompon’andraikitra amin’ny sehatra hafa, ampy handrefesana ny tsy fahaiza-manaon’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny sy ny fitavozavozany ary ny hakanosany mandray fanapahan-kevitra ny tsy fifehezany io taxi-be io.
Iankinan’ny andavanandrom-piainan’ny vahoaka ny taxi-be ka tsy tokony hodian-tsy hita sy hanaovana bemarenina ny zavatra maharary ny mponina toy izany.